Dagaaladii ugu cuslaa oo 36- si is daba Jooga uga socda duleedka Gonder. | ogaden24
Dagaaladii ugu cuslaa oo 36- si is daba Jooga uga socda duleedka Gonder.
Dagaal lagu Hoobtay oo u dhexeeya ciidamada Woyanaha iyo kuwa Jabhada Ginbot 7- ayaa ka Qarxay duleedka Konfureed ee magaalada Gonder.
Ilo wareed ka qayb Galay dagaalka oo lahadlay shabakada wararka ee Abbay Media ayaa xaqiijiyay inay socdaan dagaalo aad u culus oo xidhiidh ah, kuwaasi oo bilawday Galabnimada 23-kii bishan soona Gaadhay ilaa iyo subaxnimadii shalay.
Goob Joogaha ayaa sheegay in Itobiya dagaalkan u adeegsatay Taangiyada iyo Gaadiidka kale ee Qafilan ayna ku rakiban yihiin, madaafiicda iyo Hubka Lidka diyaaradaha waana markii ugu horaysay ee ciidamada Woyanuhu dagaalka mucaaradka u adeegsadaan Hubka culus.
Ilo wareedka qaybta ka ahaa dagaalka ee warbaahinta lahadlay ayaa waxay sheegeen in dagaalada oo laysku noqday noqday ay Labada dhinac kala kulmeen khasaare aad u xoogan oo isugu jiro dhimasho dhaawac iyo Askar la kala qabsaday.
Dhinaca Jabhada Ginbot 7- ayaa warka lagu sheegay inay dagaalka kaga dhinteen 3-Taliye kooxeed oo kamida saraakiishii Hoose ee dagaalka Hogaaminaysay, sidoo kale waxaa iyaguna ciidamada Woyanaha u Gacan galay 3-kamida ciidanka Jabhada sida warka lagu sheegay.
Dhanka ciidamada Woyanaha ayaa waxaa dagaalka lagaga dilay in kabadan 30-Askari oo ay kujiraan ilaa 5-sargaal waxaana maleeshiyada Jabhada Ginbot 7-isu dhiibay ciidan badan oo si rasmi ah ilaha warka soo tabiyay aysan tiradooda u sheegin.